Sh.Muxamed Macalin oo Booqday Dawrada ay Munadamada Beder ka wado Gaalkacyo | Sh.Muxamed Macalin oo Booqday Dawrada ay Munadamada Beder ka wado Gaalkacyo – Latest News
« Cabinet approves agreement reached by opposing sides in South West Somalia
R.W Cabdiwali oo u Ambabaxay Dalka Equatorial Guinea, Kana Qayb Galaya Shirka… »
Sh.Muxamed Macalin oo Booqday Dawrada ay Munadamada Beder ka wado Gaalkacyo
Published June 26, 2014 | By gtimes
Gaalkacyo : Booqashadaani uu Sh.Muxamed Macalin Axmed ku booqday. Ardayda wax kabarata Dawrada ay Munadamada Beder ee Ardada kabaxday Machadka Al-Faaruuq kawado Magaalada Gaalkacyo laguna Qabtay Jaamacada Bariga Afrika (Gaalkacyo) ayaa waxaa ku weheliyay Maamulaha Machadka Al-Faaruuq Sh.Cilmi Yuusuf Axmed , Gudoomiyaha Mu’asasada Al-Minhaaj
ee Dacwada iyo Horumarinta Ustaad Muxamed Maxamuud Ciise , iyo Xubno kale oo Mu’asasada katirsan.
Ujeedka Booqashada Sh.Muxamed Macalin ayaa waxaa ay ahayd sidii uu Waano iyo Dardaaran ugusoo jeedin lahaa Ardada uguna dhiiri galin lahaa inay sii wadaan Barashada Diinta oo aysan ku ekayn Dawradaan oo kaliya.
Sh.Muxamed ayaa waxaa uu ardayda uga waramay Faaidada iyo Fadliga dheeriga ah ee Barashada Diintu ay leedahay waxaana uu sheegay in Qofka uu Alle khayrka la doono uu fahansiiyo Diinta iyada oo Barashada Diintuna ay tahay Wadadii loo marayay Fahanka diinta. Dawrada oo ay ka faaidaysanayaan Rag iyo Dumarba ayaa waxaa Sh.Muxamed Macalin uu aad ugu dheeraaday WaanadaGabdhaha oo ah Hooyooyinka Mustaqbal , islamarkaana ah Tirada ugu badan ee Ardayda ka faaidaysanaysa Dawrada.
Dawrka Dhaliyarada kaga aadan u gargaarida Diinta Alle iyo Fidinteeda ayuu Sh.Muxamed Macalin ku dhiiri galiyay inay kasoo dhalaalaan oo ay u gutaan si qurux badan ayna ku daydaan Dadkii ka horeeyay iyada oo kaalinta Dhalinyarada kaga aadan u gargaarida Diinta Allana ay iskugusoo biya Shubanayso in Dhalinyaradu :-
• Ay Cilmiga Shareecada Bartaan.
• in ay ku Dhaqmaan Cilmiga ay Barteen.
• in ay ka fogaadaan Khilaafka iyo kala taga Dadkana ay ugu digaan.
• in ay ku dadaalaan isu soo dhawaynta Quluubta Dadwaynaha Muslimiinta ah.
• in ay Dadka caawiyaan ayna Wanaaga faraan Xumaantana ugu digaan.
• in ay aad ugu dadaalan Dadka inay Dacwada u gaarsiiyaan Qof , Qof.
• in ay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa Dacwada Diinta Islaamka.
Si kastaba ha ahaateen Booqashadaani uu Sh.Muxamed Macalin ku tagay
Dawrada ka soconaysa Jaamacada Bariga Afrika ee ay ay qabanayso
Munadamada (Urur) Beder ayaa waxaa uu qayb ka yahay Hawlo Dacwo oo
Shiikhu uu u joogo Magaalada Gaalkacyo.
Cabdiraxmaan Bilaal Caad (Sanka)